AutoCad 2010 အသုံးပြုနည်းမြန်မာလိုစာအုပ်
အခုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက အင်ဂျင်နီယာလောက မှာ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ AutoCad ပညာကို လိုက်စားနေ တဲ့သူတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ကျောင်းက စီနီယာအစ်ကို တစ်ယောက်ဘာသာပြန် ရေးသားပြုစုထား တဲ့စာအုပ်လေးကို မျှဝေပေးလိုက်တယ်ဗျာ
Window7Activated နှင့် Genuine မဖြစ်သူများအတွက် Loader
Window7ကို အသုံးပြုပီး Activated မဖြစ်သူများနဲ့ Genuine မဖြစ်သူများ အတွက် အခုထွက် နေတဲ့ Loder ကောင်းတာလေးတွေကိုစုပီး တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ version အစုံထည့်ပေးလိုက် ပါတယ် Version v2.0.6 နဲ့ v2.0.8 ကအခုထွက်တာလေးတွေပါ အသုံးပြုပုံကအားလုံးသိမှာပါ
ကျွန်တော် ငယ်ငယ်က မြတ်ဆရာများအား ဒီကဗျာလေးကို ကျွန်တော့်ဘလော့ဂ် ပေါ်မှာတင်ပေးရင်း ရှိခိုးကန်တော့လိုက်ပါတယ် ဆရာ/ဆရာမ များကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ ။
ကျွန်တော်တခါတုန်းက စက်ထဲကအရေးပါတဲ့ဖိုင်တွေကို Shift+Delete နဲ့မှားဖြတ်မိလို့ သွားပီဆိုပီး စိတ်ဓါတ်ကျဖူးတယ်ဗျ ဒါပေမဲ့ Google ကနေ ရှာကြည့်တော့ ပြန်ရှာလို့ရတဲ့ဆော့ဝဲ လေးတွေအများကြီးရှိမှန်းသိခဲ့ရတယ် အဲဒီဆော့ဝဲတွေအများကြီးထဲကနေ စက်ထဲမှာလဲသိပ်မလေးဘူး ဘာ Key မှလဲထည့်ပေးစရာမလိုတဲ့ဆော့ဝဲလေးကိုချစ်ပရိတ်သတ်အတွက် မျှဝေပေးလိုက်တယ်ဗျာ
ကဲဒီတခါတော့အပြုံးတစ်ချက်ပရိတ်သတ်အတွက်..gtalk ထဲကဖုန်းခေါ်တဲ့အသံတွေကိုပြောင်းမယ်ဗျာ လုပ်နည်းလေးကနည်းနည်းတော့များတယ်.:( စိတ်ညစ်သွားပီလား မပူပါနဲ့အမြန်ဆုံးနဲ့အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်အောင်..အချစ်မြို့တော်ဝန်ကြီးကူညီပါ့မယ်..
သုံးရတာ ပိုမို မြန်စေသော wyzo brower လေး သုံးကြည့်ရအောင်။
2:14 PM zayyarwin 1 comment
Wyzo browser လေးဟာ သုံးရတာ မြန်ဆန်လှပါတယ်။တခြား browser လေးတွေထက်ကို မြန်ပါတယ်။
Sentence Construction (ဝါကျ တည်ဆောက်ခြင်း)လေ့လာကြရအောင်
7:31 PM zayyarwin No comments
Sentence Construction (ဝါကျ တည်ဆောက်ခြင်း)
7:10 PM ကိုလူမောင် No comments
ကနေ့အတွက်တော့ အခုတစ်လော နံမည်ကြီးနေတဲ့ The four ဆိုတဲ့ကားလေး တင်ပါမယ်..။ ကျွန်တော်တို့ အသည်းစွဲ တရုတ်မင်းသမီးလေး လူရီဖီး( ဂူးဂူး ) ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်....။ တရုတ်သိုင်းကားတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း ထူးထူးခြားခြား စွမ်းအားတွေ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ လူလေးယောက်က လူသေကောင်တွေကို အသက်သွင်းတတ်တဲ့ လူဆိုးကြီးကို တိုက်ခိုက်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းလေးပါ...။ အစပိုင်းမှာတော့ နည်းနည်းအေးပါတယ်..။ ဒါပေမယ့် ကြည့်လို့ကောင်းလို့ ညွှန်းလိုက်ပါရစေ...။
4:43 PM ကိုလူမောင် No comments
မတင်ဖြစ်တာလဲ ကြာပီ............. ဒီနေ့အတွက်တော့ အခုနှစ် ၆ လပိုင်းက ရုံတင်ခဲ့တဲ့.. Painted Skin II ကို တင်ပေးချင်ပါတယ်.. Part I ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်က ရုံတင်ခဲ့ပြီး ပါဝင်ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး နှစ်ယောက်လုံး အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ကားလေးကို အခု ပုံစံပြောင်းပြီး အသစ်ထပ်ရိုက်ထားပါတယ်... နည်းပညာမြင့်မြင့်တွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားပြီး ပိုစတာကြေငြာနဲ့တင် လူစိတ်ဝင်စားမှု တော်တော် များများရရှိခဲ့တဲ့ ဒီနှစ်ထွက် ကားသစ်လေးကို ကြည့်စေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
အောက်က လင့်တွေမှာ ကြည့်လို့မရရင် မန့်ခဲ့ပါဦး...........
11:50 PM ကိုလူမောင် No comments
ဒီနေ့တော့ 3D ကာတွန်းကားလေးတစ်ကား တင်ပေးချင်ပါတယ်...။ ကာတွန်းကားဆိုလို့ နှာခေါင်းမရှုံ့လိုက်ပါနဲ့..။ AVATAR လိုမျိုး ခေတ်မှီနည်းပညာတွေအသုံးပြုပြီး လူတွေနဲ့ ရိုက်ကူးထားတဲ့ အတွက် ကြည့်ရတာ လုံးဝ စိတ်ကျေနပ်ဖို့ ကောင်းသလို ဇာတ်အိမ်ဖွဲ့ထားပုံကလည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ စုန်ရေလို့ပြောတဲ့ မိဘကသားသမီးတွေအပေါ်မှာထားရှိတဲ့ မေတ္တာရယ်.. ပြီးတော့ သားသမီးက မိဘအပေါ်မှာထားတဲ့ မေတ္တာတွေအပြင် ဂြိုလ်သူလေးနဲ့ လူသားတစ်ယောက်ရဲ့ ၁၅၀၀ မေတ္တာကိုပါ ပေါ်လွင်အောင် ရိုက်ကူးထားတဲ့ Mars need mom ဆိုတဲ့ ဒီဇာတ်ကားလေးကို အချိန်ရရင် ကြည့်လိုက်ကြပါဦး.....။:)
Direct speech to indirect speech လေ့လာကြရအောင်။
2:05 PM zayyarwin No comments
Direct speech to indirect speech- တိုက်ရိုတ်ပြောဆိုခြင်းမှ သွယ်ဝိုက်ပြောဆိုခြင်း
မူလပြောဆိုသူ၏ စကားများကို တိုက်ရိုတ်မပြော ပြန်မပြောပဲ သူရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ပြန်လည်း၍ သွယ်ဝိုက်ပြောဆိုခြင်းကို indirect speech
GRAMMAR(Preposition လေးတွေ လေ့လာကြရအောင်)
1:37 PM zayyarwin No comments
ENGLISH GRAMMAR (TENSES)လေးတွေ လေ့လာကြရအောင်။
10:45 PM zayyarwin No comments
လာလည်သူ သူငယ်ချင်းတွေကို english grammar လေးတွေ ထဲက tense အကြောင်းလေးကို
Adjective အကြောင်းလေး လေ့လာကြရအောင်။
3:22 PM zayyarwin No comments
Noun -နာမ်ကို အထူးပြုသော ပုဒ်ကို (adj)နာမဝိသေသန လို့ ခေါ်ပါသည်။
7:26 PM zayyarwin 1 comment
“နွေဦးကာလ မြူထသောအခါ” (ထန်းသမားဘွဲ့တျာချင်း)
Guitar pro 5.2 full version with keygen
12:32 AM အချစ်မြို့တော်ဝန် No comments
Cbox မှာ ကို Mglaymg တောင်းထားတာလေးတင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီဆော့ဝဲက အသစ်
ထွက်နေပါပီ ဒါပေမဲ့သိတဲ့အတိုင်းပဲ အသစ်ဆိုရင် crack တွေက ရှာရတာ သိပ်မလွယ်ပါဘူး
အခု တင်ပေးထားတဲ့ကောင်လေးတောင်မနည်းရှာထားရပါတယ် ကိုယ်ကလဲ ဒီလိုမျိုးဆော့ဝဲ
မသုံးဘူးတာကြောင့်ပါ ဒါပေမဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ က တောင်းဆိုလာရင် ကျွန်တော် အဆင်ပြေ
အောင် ဆောင်ရွက်ပေးပါ့မယ် အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ ဆော့ဝဲလေးက ဂစ်တာသမားတွေအတွက်
တော်တော်အသုံးဝင်မှာပါ အထဲမှာFunction တွေက မျိုးစုံပါတယ်ကျွန်တော် သူ့ကို full version
ဖြစ်အောင် keygen လေးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ဘယ်လို Full version ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်
ဆိုတာလေးပါ မသိသေးသောသူတွေအတွက် အောက်မှာကျွန်တော် အဆင့်လေးတွေနဲ့ရှင်းပြ
AllOffice Converter Platinum6.1_2
8:38 PM zayyarwin No comments
word ကနေ pdf ဖိုင်တွေ ပြောင်းချင်တဲ့သူတွေ အတွက် AllOfficeConverter
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ လိုလိုမယ်မယ်လေး ဒေါင်းထားလိုက်ပါအုံး။
Folders နဲ့ Files တွေကိုနာမည်မပေးပဲ ထားရအောင်
4:08 PM အချစ်မြို့တော်ဝန် 1 comment
Cbox မှာ ကိုရောမတောင်းထားတာလေးကိုရေးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် မသိသေးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေ
လဲနည်းပညာလေးတစ်ခုတိုးသွားတာပေါ့ Folder တွေကို Rename မပေးပဲ ဒီအတိုင်းလေးထား
ချင်တာဆိုရင်တော့အောက်က ကျွန်တော်ပြောသလိုလေးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ လွယ်လွယ်လေးပါ
3:28 PM Nyi Win Thant 1 comment
ကုလား-မြန်မာ စစ်ပွဲ ဆိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံကြီးသူ့ကျွန်ဘ၀
ရောက်နေရချိန်တွင် ဦးနု၊ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊သခင်တင်မောင် စသော ခေါင်းဆောင်များ၏
ထောက်ခံမှု ကိုယူ၍ စာရေးဆရာ မောင်သိန်းဖေမှ ရေးသားထားသော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါ
သည်။ယခုခေတ်ကာလအချိန်တွင်သာမက သမိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ကုလားများနှင့် မြန်မာ
တို့၏ အဓိဂရုဏ်းကို သိရှိစေရန် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။စိတ်ဝင်စားသူများဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ရန်
အတွက် ကျွန်တော်လင့် နှစ်ခုနှင့် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ.....
"အပြုံးတစ်ချက်" ဘလော့ကို လာကြည့်သူအပေါင်းတို့ ကိုယ်စိတ်နှလုံး ရွှင်လန်းကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလျှက်ပါ။
ဇော်ဂျီရယူရန်ပုံလေးကို Click ပါ
နေ့စဉ်သတင်းစာများ မြန်မာအလင်း သတင်းစာ ကြေးမုံ သတင်းစာ
ဂျာနယ်များ မြန်မာတိုင်းမ် ခေတ်လူငယ် ဧရာဝတီ အာရှအသံ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ လျှပ်တစ်ပြက် ပေါ်ပြူလာ ဈေးကွက်ဂျာနယ် ရန်ကုန်တိုင်းမ်
အားကစားဆိုဒ်များ ဘောလုံးပွဲများကြည့်ရန် ဘောလုံးချစ်သူတို့ဆုံဆည်းရာ ဘောလုံးပွဲရလဒ်များပြန်ကြည့်ရန် ဘောလုံးပွဲပွဲချိန်များနှင့်ဂိုးရလဒ်များကြည့်ရန် မန်ယူချစ်သူများဆုံဆည်းရာ
နိုင်ငံခြားကားများ နိုင်ငံတကာအစုံ ကိုရီးယား။တရုတ်။ဂျပန်
Design by Lovemayor. Powered by Blogger.
Nyi Win Thant
" AYT CYBER CAFE "
Phone;02-21274 / Email; aytcyber@gmail.com
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ blog လေးလဲ မရေးဖြစ်တာကြာပါပြီ...ဒီတခါတော့ နှစ်ပတ်လည် ရတုများအကြောင်းလေးကို ကျွန်တော် ဗဟုသုတ အနေ နဲ့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ......
Preposition - ဝိဘတ်(ရှေ့ဆောင်...
ADJECTIVE -နာမဝိသေသန No...
ဒီကားလေးကတော့ မျက်လှည့်ဆရာတစ်ယောက်ရဲ့.... လက်ရှိလောကကြီးကို လှည့်စားသွားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ပုဒ်ပါ...
ဒီကဗျာလေးကတော့ ချစ်သူ စိတ်ဆိုးသွားတဲ့ အချိန် ဘယ်လိုနေရမှန်းမသိ....ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ချစ်သူတွေ အတွက်ပေါ့ဗျာ... ကျွန်တော်လဲ ဖြစ်ခဲ့ရတာပါပဲ..:D......
သင်္ကြန်(ရေသဘင်ပွဲ) ပါဠိ = သင်ကန်တ =သက်ကတ=သင်္ကြန်တ သင်္ကြန် သည် သင်္ကန္တ ဆိုတဲ့ ပါဠိစကားမှ ဆင်းသက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်...
Gtalk Skin လှလှလေးတွေသုံးကြရအောင်..
ပို့စ်တွေလဲအများကြီးတင်ပေးချင်တယ် လူကလဲမအားဘူး စာတွေနဲ့ရှုပ်လိုက် ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ ဘောလုံးပွဲလေးကြည့်လိုက် နဲ့လုံးလည်ချာရိုက်နေတာ အခုအပြံ...
Copyright © 2011 အပြုံးတစ်ချက် | Powered by Blogger